Ukunikezela ngezindlu kuMasipala kusenguginqigonqo – Msunduzi News
‘YIZE zisekhona izinkinga zempilo engibhekene nazo ezinye zazo ukuthi akekho ovukayo lapha endlini aye ematohweni, kodwa ukuthola kwami uphahla oluthi mina kuwenzile umehluko.” Lawa ngamazwi kaNks uBongiwe Kasibe okuphenduleke imithandazo yeminyaka ngesikhathi ethola indlu ethi yena ngenxa yokungenelela kweMeya yoMkhandlu uMnu uThemba Njilo.
UMsunduzi News uvakashele uNks Kasibe esikhathini esiyinyanga athola uxhaso kuThemba Njilo Foundation emcimbini owabe phakathi kwabanye; uhanjelwe nguNgqongoqshe uRavi Pillay, amakhansela kaMasipala uMsunduzi, abaholi bomphakathi kanye nomphathi woUkhozi FM, uMnu uBonga Mpanza
Lo mama owakhubazeka ngonyaka we-1997 nokwaphetha ngokuthi agcine esehamba ngesihlalo esinamasondo ungomunye wamakhulu ngamakhulu abantu eMsunduzi abadinga uphahla. Elandisa ngezolo lakhe uthe: “Impilo yami yaqala ukuguquka lapho ngithola ukuthi umgogodla unenkinga nokwenza odolotela banqume ukuthi ngihlinzwe. Lokhu kwangiphendula into engelutho ngoba akekho obefisa ukungamukela kulesi simo engabe ngiyiso.
Ngiphuma esibhedlela ngahamba ngayoqasha kwaCaluza, ilapho engabona khona ukuthi angiseyena umuntu ofana nabanye. Bengihamba ngiqasha ngihanjiswe into eyodwa okuwukuthi angamukelwa njengoba ngihlala nengane yami kuphela nayo futhi encane engakwazi ukungisiza,” kuchaza uNks Kasibe. Uqhube wathi: “Besihlala endlini eyigumbi elilodwa ewumjondolo, konke esikwenzayo sikwenzela kuyona. Bekuke kube nzima ukuthi nginyakaze ngoba ngihamba nganasi isihlalo,” kulandisa uNks Kasibe ngomunyu.
Ubengeyedwa uNks Kasibe ekutholeni umxhaso. Omunye wabahlomule ngendlu kube nguNks uPhindile Ndlovu nothe bayabonga ukuthi kusekhona abantu abafana noNjilo.
“Ukuhlupheka kimina ngikubona kuyinto ephelile njengoba sengizokwazi ukuthi ngifihle ikhanda endlini enesithunzi. Nginezingane zami besihlala endlini ewumjondolo, uNjilo usitakule osizini, yikho ngithi izandla zedlula ikhanda,” kusho uNks Ndlovu.
Ekhuluma naleli phephandaba uNjilo uthe: “Ukuba nophahla ngenye yezinto ezibuyisa isithunzi kumuntu. Lokhu okwenzeka lapha yimizamo yokwandisa umuzwa wabantu abathi isithunzi sami noma somndeni wami sibuyile. Ngiselapho ngiyafisa ukusho ukuthi udaba lwezindlu ngeke lube wudaba lukaHulumeni yedwa ngoba ngeke aluthwale yedwa. UHulumeni noma ngabe ngowendawo uyadinga ukulekelelwa ngosomabhizinisi ukuze babe baningi ababuyelwa yisithunzi,” kusho uNjilo.
UMnu uMpanza yena uthe umsakazo wakhe uzwa usizi lwabantu cishe nsuku zonke iningi likhala ngophahla. “Uma usebenzela umsakazo omkhulu njengoKhozi futhi oyintandokazi kubantu uhlale uzwa ubuhlungu uma uzwa usizi olubikwa ngabantu lapha phandle. Kwaba yileso sizathu njegomsakazo sazibandakanya ezinhlelweni eziningi zokusula imiphakathi yethu izinyembezi nokubuyisa isithunzi.
Omunye wale misebenzi yilo owenziwa nguNjilo nosenza sethabe njalo uma sibona abantu bekhala izinyembezi zenjabulo,” kusho uThabekhulu
AmaNadi nesiqalo esisha
Previous post: Uhlelo loMsunduzi lokusabalalisa umnotho
Next post: UMsunduzi nethuba lesiqalo esisha sezakhamuzi